Museum Ripley, Museum Ripley "Mino izany na tsia" - Copenhagen
Eoropa Danemark Copenhagen
Ny Museum Ripley
Adiresy: Rådhuspladsen 57, 1550 København, Danemark
Tranonkala Ofisialy: www.ripleys.com
Fotoana misokatra: 10: 00-22: 00 isan'andro amin'ny fahavaratra, 10: 00-18: 00 ny andro sisa amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy
Ny Ripley dia mino izany na Tranombakoka tsy misy afa-tsy ny lova manan-karenan'ilay mpamory Anglisy malaza, mpikaroka ary mpanao gazety Robert Ripley. Nanangona zavatra tsy mahazatra toy izany izy nandritra ny androm-piainany, ny fahalianan'ny maro tsy very hatramin'izao.
Isan-taona dia misy mpizaha tany an-tapitrisany maro manerana izao tontolo izao no mitsidika ireo tranombakoka tsara indrindra metropolitan . Raha mikaroka sary ianao, zavatra tsy mahazatra sy tsy mahazatra, dia raiso any amin'ny tranombakoka Ripley "Believe It or Not", any Copenhagen .
"Mino izany sa tsia!"
Inona no azoko lazaina, nefa eto no ahafahan'ny mpitsidika mahita, ohatra, ny hatsaran-tarehin'ny harpa iray, izay tsy hino anao, fa tsy misy singa ary koa fotoana ahafahanao milalao hira mahagaga. Ho gaga ihany koa ianao hahita ny Taj Mahal kely, naorina avy amin'ny takelaka 400.000.
Te hanana zavatra tena manokana ve ianao? Tahaka anao izao: vadin'ny mpanjakavavy Margrethe, marina, noforonina tamin'ny alalan'ny fanampiana sakafo fanafody. Mampatahotra kely, saingy mahaliana tokoa ny mahita lehilahy iray manana mpianatra efatra, ny taolam-paty goavambe iray, ary koa ny robot ny hoavy.
Raha hitsidika ity tranombakoka ity ianao, dia ho afaka hianatra ny fomba hanoratana taratasy amin'ny voankazo iray. Misaotra ireo fampiratiana mahaliana, ho azonao ny fomba hamonoana ny vampire mahatsiravina, ary hijery ny olona voaheloka izay tafavoaka velona tamin'ilay sazy fanamelohana ho faty (ary taorian'ny famoahana bala 14). Ankoatra izany, mifankazà amin'ny Scotsman, izay manana tatoazy miaraka amin'ny sarin'ireo 102 Dalmatiana eo ambanin'ny kilt, ary koa hianatra ny fomba azo atao ary azo atao foana ny mitazona ny fifandanjana ao anaty tonelina iray izay manodina foana.
Ny Tranombakoka Ripley "Minoa fa na tsia," dia tsy lavitra ny seranam-piantsonan'i Copenhague , ka afaka mandeha any an-tongotra ianao na amin'ny laharana faha-59, atsaharo ny "Radhuspladsen". Any akaikin'ny tranom-bakoka dia misy iray hafa manintona an'i Danemark - ny tontolo an'i G.Kh. Andersen , izay tena liana tokoa hitsidika ny fianakaviana manontolo amin'ny ankizy.
Kornik - fomba fitsaboana fofona amam-bovoka ao an-trano
Tery 40 isaky ny ankizy - inona no atao?
Adama sy Eva - tantaran'ny raibe sy renibe
Inona avy ireo vokatra enti-manafoana amin'ny famonoana?
Mikarakara ny dachshund
Tablets avy amin'ny tsindry avy amin'ny intracranial
Inona no nofinofin'ny fitaratra tapaka?
Geiger - fiomanana amin'ny ririnina
Fitsaboana amin'ny ampongabendanitra grenady
Ahoana ny fomba famongorana phytophthora ao amin'ny tany?
Sakafo mihinana - resipe
Inona no jeans mitafy amin'ny ankizivavy feno?
Nahoana no manonofy kiraro?
Pskov - toetrandro
Fampakaram-bady akanjo mariazy - ny modely tsara indrindra sy ny akanjo ho an'ny lanonana amoron-dranomasina
Fitaovam-panandramana ho an'ny batteries